Bala i-Principal Interesting Principal, Rate, okanye Ixesha
Indlela yokusebenzisa i-Formule ye-Inmula elula
Ukubala inzala elula okanye isixa- nqununu , isantya, okanye ixesha lomboleko lingabonakala lidideka, kodwa akunjalo ngokwenene! Nazi izibonelo zendlela yokusebenzisa ifomula yenzalo elula ukufumana ixabiso elide nje ngokuba wazi abanye.
Ukubala Inzala: Inqununu, iNqanaba kunye nexesha eliyaziwayo
Xa uyazi isixa-mali esiyintloko, izinga kunye nexesha. Isixa somdla singabalwa ngokusebenzisa ifom: I = Prt.
Kule sibalo singentla, sinama-$ 4,500.00 ukutshala (okanye ukuboleka) ngesantya se-9.5% kwiminyaka eyi-6.
Ukubala Inzala Efunyenweyo Xa iNqununu, uMlinganiselo kunye nexesha Ziyaziwa
Bala inani lenzalo kwi $ 8,700.00 xa ufumana i-3.25% ngonyaka ukwenzela iminyaka emithathu. Kwakhona, ungasebenzisa i-I = Prt ifom yokumisela inani lemali elifunyenweyo. Hlola kunye nekhompyutha yakho.
Ukubala Inzala Xa Ixesha Linikezelwa Ngeentsuku
Masithi ufuna ukuboleka i-$ 6,300.00 ukusuka ngoMatshi 15, 2004 ukuya kuJanuwari 20, 2005 ngo-8%. I-formula iya kuba yimi = Prt, nangona kunjalo, kufuneka ubale iintsuku.
Ukwenza njalo, awuyi kubala usuku oboleke ngayo imali okanye umhla obuyiswa ngawo imali. Masifunde iintsuku: Matshi = 16, Epreli = 30, Meyi = 31, Juni = 30, Julayi = 31, Agasti = 31, Septemba = 30, Oktobha = 31, Septemba = 30, Oktobha = 31, Novemba = 30, Disemba = 31, Januwari = 19. Ngako oko ixesha li-310/365. Iyonke imihla engama-310 kwimihla engama-365. Oku kungeniswa kwi-formula.
Yiyiphi inzala kwi-890.00 ye-12.5% ​​kwiintsuku ezingama-261?
Kwakhona, unokusebenzisa ifomu I = Prt. Unayo yonke ingcaciso oyifunayo ukunquma umdla kulo mbuzo. Khumbula, iintsuku ezingama-261/365 ukubala kwexesha lexesha.
Fumana iNqununu Xa Uyazi Umdla, Umlinganiselo, kunye nexesha
Yiyiphi imali yenqununu eya kuzuza inzala ye-$ 175.50 kwi-6.5% kwiinyanga eziyi-8? Kwakhona ungasebenzisa ifom efumanekayo ye-I = Prt, eya kuba yiP = I / rt. Sebenzisa umzekelo ongentla ukukunceda. Khumbula, iinyanga ezili-8 ziyakwazi ukuguqulwa iintsuku okanye, ndingasebenzisa i-8/12 kwaye ndishenxise i-12 kwi-numerator kwindlela yam.
Yiyiphi Ingqungquthela Yemali onokuyihlawula ngayo iintsuku ezingama-300 kwi-5.5% ukufumana i-$ 93.80?
Kwakhona ungasebenzisa ifom efumanekayo ye-I = Prt eya kuba yiP = I / rt. Kule meko, sinemihla engama-300 eya kubonakala ngathi i-300/365 kwindlela yethu, khumbula ukuhambisa i-365 kwi-numerator ukwenzela ukuba ifomula isebenze. Phuma i-calculator yakho kwaye ukhangele impendulo yakho ngesisombululo esingentla.
Yiyiphi Intlawulo yeMali yonyaka efunekayo kwi-$ 2,100.00 ukufumana i-122.50 kwi-14 inyanga?
Xa inani lemfuno, inqununu kunye nexesha liyaziwa, ungasebenzisa ifom efunyenweyo ukusuka kwifomula yenzalo elula ukufumana isantya. I = Prt iba r = I / Pt. Khumbula ukusebenzisa i-14/12 ngexesha kwaye uhambise i-12 kwi-numerator kwifom apha ngasentla. Thola i-calculator yakho kwaye ukhangele ukuze ubone ukuba ulungile.
Bala ipesenti - i-GMAT kunye neGG izimpendulo zeMG kunye neenkcazelo
Iingxaki zokuSombulula iingxaki
Indlela yokuSombulula iNgxowa-mali ukulungisa iRipipe
10 Funny Funny Celebrity Accounts Ukukhawulela Ukutya Kwakho
Indlela yokukhumbula iSikhumbuzo
Yintoni iPop Music?
Indlela yokudla iifom ezifusiwe Isifundo soLuntu kwiSifundo soBomi
Iindlela ezili-10 zokubeka ikhaya kwikolweni
Mayelana ne-Bark Mitzvahs yeenja
Yiyiphi i-Blue Dog Democrat?
I-Nietzsche, Inyaniso, Nonyani
Amagama amaninzi aseGrike namaRoma
Imfazwe Yehlabathi I: Imfazwe Ekufeni
Indlela yokudibanisa 'Ukuqaphela' (kuya kuSaziso; ukukhumbula)
Yintoni eVakalayo kwiBhola?
Iiprogram ezingama-25 eziphezulu zokusasazela Umculo
Ii-Oldies Iingoma ezisetyenziswe kwii-TV zoRhwebo